IFTIINKACUSUB.COM: Xisbiga Wadani iyo booqashada dadka bukaanka ah iyo Isbitalada maxaa kala haystay.
Xisbiga Wadani iyo booqashada dadka bukaanka ah iyo Isbitalada maxaa kala haystay.
Iftiinkacusub.com : Booqashada iyo soo bariidinta dadka bukaanka ah ama xanuusanayaa waa mid fiican.Ilahayna waxa uu inoo sheegay in ajar iyo xasanaad aad u badan uu helaayo cidda hadba soo booqata dad dhibaataysan ama xanuusanaaya.
Hadaba waxaa aad moodaa baryahan in Xisbiga Mucaradka ah ee WADANI ay si xawli ah u laban laabeen, booqashooyin iyo baaridin aan hore looga baran,taasi oo ay kolba guri iyo Dhakhtar ay ku booqanayaan dad dhibaataysan ama xanuusanaaya.
Arintan booqashada iyo bariidada dadka xanuusanaaya waxa ka gilgishay ama ay ka cadhaysiisay ,xisbiga Muxaafidka ah ee KULMIYE,kuwaasi oo u arkay in xisbiga WADANI uu arintan kaanbayn iyo olole qarsoodi ah uu uga jeedo.
Inkastoo aan la odhan karin Xisbiga WADANI arintan booqashada ah ee uu baryahan sida isdaba jooga ah ku fulinayaa, waxa ay tahay mid kaanbeen iyo is-tustus looga jeedo, ama dadka naxariis iyo qalbi jilayc loogu muujinaayo,si ay hadhaw ololaha doorashada ugu soo beer-dabcaan,hadana booqashada iyo soo baridiinta dadka xanuusanayaa waa mid waajib inagu ah,mana aha in laga xumaado.
Xisbiga KULMIYE waxa aad moodaa in si xawli ah loogaga dheereeyay arintan soo booqashada dadka dhibaataysan,taas badalkeedna hogaamiye Muuse Biixi ayaa waxa uu si xirfadaysan ula kaftamay madaxda Xisbiga WADANI ,isaga oo sheegay in ay yihiin madaxda Xisbiga Wadani kuwo itaal ama siyaasad kale waayay ,aan ahayn in ay kolba Kamarad iyo VD ay la tultagaan dad sakaraada ama xanuusanaaya.
Sida aad in badan ka arkaysaan baraha bulshada ,ayaa waxa aad moodaa in Xisbiga WADANI uu si xawli ah u bilaabay ololaynta iyo kaanbayn uu kaga warhaynaayo dadka xanuusanaaya ee Somaliland,taasi ayaa dadka qaar waxa ay ku dhalisay in Wadani ay arintani ka tahay mid siyasadeed.
Xisri Cali X Xasan ayaa isna booqasho taasi la mid ah ku tagay Isbitaalka magalda Caynaba,halkaasi oo sida la sheegay ay askartu ka horjoogsadeen,taasi oo loo fahmay in xisbiga KULMIYE oo ka cadhooday booqashadan qorshaysan ee Xisbiga WADANI uu bukaanada ku booqanaayo.
Bishan oo kaliya haddii loo kuurgalo waxa ay noqonaysaa in xisbiga WADANI uu guryahooda iyo Isbitaalada ku booqday boqolaal qof kuwaasi oo laga yaabo in ay takulo iyo ka warhayn ay u gaystayn.
Cabdiraxmaan Cirro oo ah musharaxa xisbiga WADANI,ayaa la odhan karaa isaga laftiisu waxa uu yahay, mid dhaqan u leh u naxariisashada iyo damqashada dadka tabaalaysan,waana mid dhici karta in fikirkan iyo ololahan xawliga ah ee booqashada dadka tabaalaysani uu ka yimiba hogaamiye Cabiraxmaan Cirro .
Xiligan aynu ku jirno Somaliland Xisbiyada qaranka looma ogola in ay kaanbayn siyasadeed oo ololaysan in ay qadaan ,balse Xisbi kastaa waxa uu xaq u leeyahay in uu barnaamij siyasadeed si farsamaysan oo xeel dheer uu ku qariyo ololahiisa.
Somaliland waxa la isku xantaa in qofkasta oo bukaa ama xanuusanaya, in uu janto ama uu jeclaysto in uu soo booqdo gudoomiayaha xisbiga Wadani Mudane Cabdiraxmaan Cirro iyo waftiga had iyo goor la socda,taas badalkeeda ayaa waxa ay ka cadhaysiisaa Muuse Biixi iyo xisbiga Kulmiye oo xanaaq aad ah ka muujiya marka ay shaashada TV-yada ka arkaan Cabdiraxmaan Cirro oo qof buukaan ah dultaagan ama deeq lacag ah siinaaya.
Qofkasta oo bukaan ah ama xanuusanaaya isla markaana Dhakhtar ku jiraa ,waxa uu ku hadaaqayaa ""Cabdiraxmaan Cirro iyo xisbiga Wadani ii geeya""taasi ma noqon kartaa in xisbiga Wadani uu ku guulaystay arin muhiimadeeda leh,mase loo fahmi karaa sida ay dadka qaar aamin sanyihiin,in arintan booqashada dadka bukaanka ahi ay tahay mid Wadani kaanbayn iyo siyaasad ka ah, balse aan Allah dartii loo fulinayn.
Waxa aan ka baqaa in dhawaan madaxda Xisbiga WADANI in laga mamnuuci doono ,tagitaanka iyo soo booqashada dadka buka,aakhirkana Calanka astaanta u ah xisbiga WADANI isna laga ilaalindoono dhamaan Dhakhaatiirta iyo Isbitaalada lagu arko maro Liimi ah.
W/Q:KHdara Ibrahim Aar